Kooxaha Arsenal & Chelsea oo isku diyaarinaya inay ku dagaallamaan saxiixa xiddig ka tirsan Barcelona – Gool FM
(London) 01 Abril 2019. Kooxaha reer London ee Arsenal & Chelsea ayaa la soo warinayaa inay isku diyaarinayaan inay ku dagaallamaan xagaaga saxiixa xiddig ka tirsan naadiga Barcelona.
Arsenal iyo Chelsea ayaa labaduba la sheegayaa inay aad u saxiixanayaan xagaagan saxiixa daafaca Kooxda Barcelona ee Samuel Umtiti.
Daafacan reer France ayaa muddo dheer bartilmaameed u ahaa Gunners, kuwaasoo doonaya inay ugu dambeyntii keenaan garoonka Emirates dhammaadka xilli ciyaareedka.
Umtiti ayaa boos joogto ah ka helay Barca tan iyo markii uu shaqada kooxdaasi qabtay tababare Quique Setien, laakiin waxaa suuragal ah inuu wali jecel yahay inuu isbedel ku sameeyo muuqaalkiisa.
Jariiradda Mundo Deportivo ayaa warinaysa in Chelsea ay u dhawaatay sidii ay Umtiti u heli lahayd haddii aysan ku jirin xayiraaddii suuqa kala iibsiga ee ay soo rogeen UEFA.
Waxay intaas ku dareen in Umtiti uu u furnaan lahaa u dhaqaaqistiisa garoonka Stamford Bridge, isla markaana uu diyaar u ahaa wakiilkiisa inuu kala hadlo heshiis ay la galaan madaxda Chelsea.
Dhanka kale, Chelsea ayaa la rumeysan yahay inay xiriir la sameeyeen wakiilka Umtiti ee Arturo Canales si uu uga dhawaaqo inuu tagayo.
26-sano jirkaan ayaa door-bidi lahaa inuu ku sii nagaado Barcelona, laakiin wuxuu diyaar u yahay inuu u wareego koox ciyaaraysa Champions League, waxaana uu door bidayaa Chelsea marka loo eego Arsenal iyo Man Utd, kuwaasoo sidoo kale loo soo bandhigay adeeggiisa.
Barcelona ayaa diyaar u ah inay iska iibiso daafacan dhexe dhammaadka xilli ciyaareedkaan, iyadoo dalbanaysa adduun dhan 46 milyan oo gini oo ay duldhigtay madaxiisa.
Tababaraha Chelsea ee Frank Lampard wuxuu door-bidayaa inuu la soo wareego daafac dhexe iyo sidoo kale weeraryahan, madaama uu booska daafaca dhexe ee Blues uu ku haysto Kurt Zouma iyo Andreas Christensen.
Dhanka kale Arsenal ayay u badan tahay inay ku shaqeyn doonaan miisaaniyad adag xagaagan, waxaana durbaba ay haystaan da’yarka William Saliba inuu ku biiro safkooda, halka daafaca reer Spain ee Pablo Mari uu kooxda u saxiixay bishii Janaayo, laakiin saxiixa Umtiti ayaa calaamad weyn u ah ujeedka Gunners.